“ဘဝမှာ အောငျမွငျပွီး ခမျြးသာခငျြသူမြားအတှကျ” - ONE DAILY MEDIA
“ဘဝမှာ အောငျမွငျပွီး ခမျြးသာခငျြသူမြားအတှကျ”
(၁) အခြိနျကို တနျဖိုးထားပါ
ကိုယျ့ဘဝကို အထောကျအကူ မပေးနိုငျမယျ့အရာတှနေဲ့ အခြိနျကို မဖွုနျးလိုကျပါနဲ့။ လောကမှာ အခြိနျကို တနျဖိုးထားကွသူတိုငျး အောငျမွငျကွတယျ။ ခမျြးသာကွတယျ။ သောမတျဈအကျဒီဆငျဟာ လြှပျစဈမီးသီးတီထှငျနိုငျဖို့အတှကျ နရေ့ောညပါ အားသှနျခှနျစိုကျနဲ့ ကွိုးစားခဲ့လို့ သူ့ရဲ့တီထှငျမှုဟာ အောငျမွငျခဲ့ပွီး ယနထေိ့ ခြီးကြူးဂုဏျပွုခံနရေသူပါ။ဒါဟာ အခြိနျကို တနျဖိုးထားခွငျးကွောငျ့ ရတဲ့ အကြိုးရလဒျပဲ ဖွဈပါတယျ။
(၂) Brand အသဈတှေ ပျေါလာတိုငျး ဝယျဖို့ မစဉျးစားပါနဲ့
အသဈပျေါလာတိုငျး ဝယျမယျဆို မလိုလားအပျပဲ ဖွုနျးရာကပြါတယျ။ “ကိုယျတကယျလိုအပျနသေလား။ခုလကျရှိ သုံးနတေဲ့ပစ်စညျးက မကောငျးတော့ဘူးလား။ဒီပစ်စညျး မရှိရငျ မဖွဈဘူးလား။ကိုယျ့အတှကျအကြိုးရှိမယျ့ ပစ်စညျးမြိုးလား”စသဖွငျ့ မဝယျခငျ ၃ကွိမျ စဉျးစားပွီးမှ ဆုံးဖွတျပါ။ ကိုယျလိုခငျြတာကို မွငျတာနဲ့ တနျးမဝယျပါနဲ့။
ကမ်ဘာပျေါတှငျ အကွီးအကယျြကွီးပှားခမျြးသာပွီး အောငျမွငျနကွေသူမြားဟာ အလုပျကွိုးစားကွသူမြား၊ဝီရိယအားကောငျးကွသူမြား ဖွဈပါတယျ။ “ကွိုးစားက ဘုရားဖွဈ”ဆိုတဲ့ မွနျမာဆိုရိုးစကားရှိပါတယျ။ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားသညျ ဘုရားဖွဈရနျအတှကျ လေးသင်ျခနြှေငျ့ ကမ်ဘာတဈသိနျး ပါရမီဖွညျ့ခဲ့ရပါတယျ။လှယျလှယျနဲ့မဖွဈပါဘူး။ တကယျကွိုးစားလို့သာ ဖွဈတာပါ။
စာအုပျမြားသညျ ကိုယျ့ဘဝအောငျမွငျတိုးတကျရေးအတှကျ အသုံးခနြိုငျတဲ့ လှကေားထဈပဲဖွဈပါတယျ။ စာဖတျခွငျးဖွငျ့ မှားသညျ မှနျသညျ အကောငျးအဆိုး အကွောငျးအကြိုးကို ဝဖေနျပိုငျးခွားနိုငျပါတယျ။ စာအုပျတှထေဲကနေ ကိုယျသိခငျြတဲ့ အကွောငျးအရာတှေ ကိုယျမသိသေးတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို သိရှိနိုငျပါတယျ။ စာဖတျဆိုပငျမယျ့ ဖတျရုံသာမဟုတျပဲ ဖတျ၊မှတျ၊လိုကျနာ၊ကငျြ့သုံးဖို့လညျး လိုအပျပါတယျ။
(၅) အလုပျကို တနျဖိုးထားပါ
အလုပျကို တနျဖိုးထားပါ။ ဝငျငှလေမျးကွောငျး အမြားကွီးဖှငျ့ထားပါ။ ရလာတဲ့ငှကေို စုပွီးရငျးနှီးမွုပျနှံပါ။‌ငှကေို ဘဏျထဲ သို့မဟုတျ အိမျထဲမှာ အောငျးမထားပါနဲ့။ ငှကေို အသုံးခနြိုငျဖို့ အမွဲစဉျးစားပါ။
အထကျက ဝမြှေပေးထားတဲ့အခကျြတှထေဲက ကိုယျ့မှာ ဘာလိုအပျနသေလဲ? ဘာတှထေပျလုပျရမလဲ? ဘာတှဆေငျခွငျရမလဲ? ဆိုတာ ဆနျးစဈကွညျ့ပွီး အောငျမွငျမှုတှကေို ရလိုကျယူပါ။
“အားလုံးပဲ တနမှေ့ာ အောငျမွငျပွီး ခမျြးသာသူမြား ဖွဈကွပါစေ”
(၁) အချိန်ကို တန်ဖိုးထားပါ
ကိုယ့်ဘဝကို အထောက်အကူ မပေးနိုင်မယ့်အရာတွေနဲ့ အချိန်ကို မဖြုန်းလိုက်ပါနဲ့။ လောကမှာ အချိန်ကို တန်ဖိုးထားကြသူတိုင်း အောင်မြင်ကြတယ်။ ချမ်းသာကြတယ်။ သောမတ်စ်အက်ဒီဆင်ဟာ လျှပ်စစ်မီးသီးတီထွင်နိုင်ဖို့အတွက် နေ့ရောညပါ အားသွန်ခွန်စိုက်နဲ့ ကြိုးစားခဲ့လို့ သူ့ရဲ့တီထွင်မှုဟာ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ယနေ့ထိ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုခံနေရသူပါ။ဒါဟာ အချိန်ကို တန်ဖိုးထားခြင်းကြောင့် ရတဲ့ အကျိုးရလဒ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) Brand အသစ်တွေ ပေါ်လာတိုင်း ဝယ်ဖို့ မစဉ်းစားပါနဲ့
အသစ်ပေါ်လာတိုင်း ဝယ်မယ်ဆို မလိုလားအပ်ပဲ ဖြုန်းရာကျပါတယ်။ “ကိုယ်တကယ်လိုအပ်နေသလား။ခုလက်ရှိ သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းက မကောင်းတော့ဘူးလား။ဒီပစ္စည်း မရှိရင် မဖြစ်ဘူးလား။ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ့် ပစ္စည်းမျိုးလား”စသဖြင့် မဝယ်ခင် ၃ကြိမ် စဉ်းစားပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ပါ။ ကိုယ်လိုချင်တာကို မြင်တာနဲ့ တန်းမဝယ်ပါနဲ့။
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အကြီးအကျယ်ကြီးပွားချမ်းသာပြီး အောင်မြင်နေကြသူများဟာ အလုပ်ကြိုးစားကြသူများ၊ဝီရိယအားကောင်းကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်။ “ကြိုးစားက ဘုရားဖြစ်”ဆိုတဲ့ မြန်မာဆိုရိုးစကားရှိပါတယ်။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားသည် ဘုရားဖြစ်ရန်အတွက် လေးသင်္ချေနှင့် ကမ္ဘာတစ်သိန်း ပါရမီဖြည့်ခဲ့ရပါတယ်။လွယ်လွယ်နဲ့မဖြစ်ပါဘူး။ တကယ်ကြိုးစားလို့သာ ဖြစ်တာပါ။
စာအုပ်များသည် ကိုယ့်ဘဝအောင်မြင်တိုးတက်ရေးအတွက် အသုံးချနိုင်တဲ့ လှေကားထစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ စာဖတ်ခြင်းဖြင့် မှားသည် မှန်သည် အကောင်းအဆိုး အကြောင်းအကျိုးကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ပါတယ်။ စာအုပ်တွေထဲကနေ ကိုယ်သိချင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ ကိုယ်မသိသေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်ဆိုပင်မယ့် ဖတ်ရုံသာမဟုတ်ပဲ ဖတ်၊မှတ်၊လိုက်နာ၊ကျင့်သုံးဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။
(၅) အလုပ်ကို တန်ဖိုးထားပါ
အလုပ်ကို တန်ဖိုးထားပါ။ ဝင်ငွေလမ်းကြောင်း အများကြီးဖွင့်ထားပါ။ ရလာတဲ့ငွေကို စုပြီးရင်းနှီးမြုပ်နှံပါ။‌ငွေကို ဘဏ်ထဲ သို့မဟုတ် အိမ်ထဲမှာ အောင်းမထားပါနဲ့။ ငွေကို အသုံးချနိုင်ဖို့ အမြဲစဉ်းစားပါ။
အထက်က ဝေမျှပေးထားတဲ့အချက်တွေထဲက ကိုယ့်မှာ ဘာလိုအပ်နေသလဲ? ဘာတွေထပ်လုပ်ရမလဲ? ဘာတွေဆင်ခြင်ရမလဲ? ဆိုတာ ဆန်းစစ်ကြည့်ပြီး အောင်မြင်မှုတွေကို ရလိုက်ယူပါ။
“အားလုံးပဲ တနေ့မှာ အောင်မြင်ပြီး ချမ်းသာသူများ ဖြစ်ကြပါစေ”
“ဘယျလိုအခကျအခဲမြိုးကိုမဆို ကိုယျ့ကိုယျကို ယုံကွညျတဲ့စိတျနဲ့ အမွဲရှဆေ့ကျနိုငျအောငျ ကွိုးစားပါ”
“အောငျမွငျမှုဆီကိုဆှဲချေါသှားနိုငျမယျ့ အလအေ့ထ (၁၀)ခု”